Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) - Hello Sayarwon
Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်)
Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Lactic acid ကို ဆေးပညာ အခေါ်အဝေါ်ဖြင့် keratolytic (keratin ကို ချေဖျက်သော ပစ္စည်း) ဟုလည်း ခေါ်သည်။ Keratin ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်မှာ အရေပြားအပေါ်ယံလွှာရှိ ဆဲလ်များကို အတူတကွ ရှိနေစေရန် ထိန်းသိမ်းရသည့် တာဝန်ဖြစ်သည်။ keratin သည် အရေပြားကို မာစေ၊ကြမ်းတမ်းစေသဖြင့် ၎င်းကို ချေဖျက်ပေးခြင်းဖြင့် အရေပြားကို နူးညံ့စေသည်။ ထို့ကြောင့် lactic acid သည်အရေပြားရှိ ဆဲလ်သေဆဲလ်ဟောင်းများကို ကွာကျစေပြီး အရေပြား၏ အစိုဓါတ်ကို ထိန်းပေးကာ နူးညံ့စေသည်။
Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အချို့သော ဆေးများသည် အသုံးမပြုမီ ကောင်းစွာ လှုပ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် လှုပ်ရန်လိုမလို သိရှိနိုင်ရန် ဆေးပုလင်းရှိ အညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ပါ။ လိမ်းလိုသော အရေပြားနေရာသို့ ဆေးကို တနေ့လျှင် ၁ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိမ်းပေးပါ။ ပြီးလျှင် အသားထဲ စိမ့်ဝင်အောင် ဖိပွတ်ပေးပါ။ ဆေးတံဆိပ်နှင့် သင့်အရေပြား အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးလိမ်းရမည့် အကြိမ်ရေကွဲပြားနိုင်သည်။
lactic acid သည် လက် သို့မဟုတ် လက်သည်းခြေသည်းများကို လိမ်းရန်သာဖြစ်သည်။(ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့် အခါမျိုးမှတပါး) မျက်လုံး၊ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်အတွင်းပိုင်း၊နှာခေါင်းအတွင်း၊မ အင်္ဂါ နှင့် ပေါင်ခြံတဝိုက်တို့ကို မလိမ်းရပါ။ မလိမ်းသင့်သည့်နေရာ နှင့် အသားအရေအမျိုးအစားတို့ကို သေချာစွာ သိရှိစေနိုင်ရန် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ သို့မဟုတ် ဆေးအညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ပါ(ဥပမာ။ ။ မျက်နှာ၊ထိခိုက်ရှနာပွန်းပဲ့ အနာဖြစ်နေသော အရေပြား၊လတ်တလောအမွှေးရိတ်ထားသော အရေပြားနေရာ)။ အသေးစိတ်သိလိုလျှင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပါ။ ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင် အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်စေရန် ဆေးကို မှန်မှန်လိမ်းပါ။ အရေပြားကို နူးညံ့စိုစွတ်စေသည့် အရာအတော်များများသည် အာနိသင်ကောင်းစွာပြရန်အတွက် ရေလိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေချိုးပြီးကာစ အရေပြား စိုစွတ်နေသေးသည့် အချိန်တွင် lactic acid ကို လိမ်းပေးရပါမည်။ အလွန်ခြောက်သွေ့သော အသားအရေပိုင်ရှင်များ အတွက်မူ ဆေးမလိမ်းမီ ဆေးလိမ်းမည့်နေရာကို ရေစိမ်ထားရန် ဆရာဝန်ကို ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရေချိုးခြင်း၊ရေနွေးပူပူနှင့် ချိုးခြင်း သို့မဟုတ် မကြာခဏ ရေချိုးခြင်း၊ရေဆေးခြင်းတို့က အသားအရေ ခြောက်သွေ့မှုကို ပိုဆိုးစေပါလိမ့်မည်။
ရောဂါအခြေအနေ မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားပါ။
Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Lactic acid ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Lactic acid ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Lactic acid ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Lactic acid ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Lactic acid ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Latic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
lactic acid ကို အသုံးမပြုမီ အောက်ပါအချက်များရှိပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
lactic acid ခရင်မ်တွင်ပါသော အရာတခုခုနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် (အထူးသဖြင့် လ အတော်ရင့်နေလျှင်)၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
သင်လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်ရှိသည့် ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေး၊ မိမိဖာသာ သောက်သည့်ဆေး၊ဗီတာမင်အားဆေး၊သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်)ကို သင့်ဆရာဝန်အား သေချာစွာ ပြောပြပါ။
သင့်အနေဖြင့် ဆေးဝါး၊အစားအစာ သို့မဟုတ် အရာတခုခုနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက lactic acid သုံးစွဲခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
ဆေးလိမ်းထားသည့်နေရာတွင် ပြင်းထန်စွာ ပူလောင်ခြင်း၊နီရဲခြင်း၊စူးပြီးနာနေခြင်း သို့မဟုတ် အရေပြားကွာခြင်း။
အရေပြား အနည်းငယ်ကွာခြင်း သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရေပြား အနည်းငယ် နီရဲခြင်း သို့မဟုတ် အထိမခံနိုင်ခြင်း၊သွေးခြေဥခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ အရေပြား မည်းလာခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lactic acid ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Lactic acid က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lactic acid ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသားအရေ ခြောက်ကပ်ခြင်း နှင့် ယားယံခြင်းအတွက် :
အသားချောဆီ/လှဆီ အဖြစ် —->အသုံးပြုလိုသော နေရာသို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်း လိမ်းပေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Lactic Acid (လက်တစ်အက်ဆစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အရေပြားလိမ်းခရင်မ် ။ ၁၀%
Lactic acid. https://www.drugs.com/cdi/lactic-acid- cream.html. Accessed June 26, 2016